Galii taphattotaa: Ronaaldoo, Mesiifi Zilaataan Ibrahimovich sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Galii taphattotaa: Ronaaldoo, Mesiifi Zilaataan Ibrahimovich sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabatan
Galii taphattotaa: Ronaaldoo, Mesiifi Zilaataan Ibrahimovich sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabatan
Dirree kubbaa irratti taphataa kamtu caalaan, irra jireessatti Ronlaadoofi Mesii wolbira qabaa, falamii yeroo hedduuf adeemaa tureedha. Isa kanatu san caalaa, bifa wolnama hindhabsiisneen, yeroo heddu murtee dabarsuun nama rakkisa. Hangamuu rakkisaafi mormisiisaa haa ta’uu malee woggaa woggatti sadarkaa taphattotaa kan agarsiisan labsii heeddutu bayu. Sadarkaa taphataan tokko irratti argamu kanniin argisiisuuf carraaqan keessaa badhaasni taphataa tokkoffaa addunyaa (Ballon d’or) isa tokko.
Sadarkaan taphataan tokko irra jiru kan shallagamu ykn kaayamu tapha dirree irratti (gooliif meeqa galche, tapha akkamii argisiiseefi wancaa meeqa injifate) godhamu qofaanii miti. Dirreen alattis taphatoota jiddutti ol’aantummaa wolirratti argachuuf yaaliin godhamu jira. Madaalliin dandeettii, jaalatamiinsaafi fudhatamiinsa taphataa tokkoo ittiin agarsiifamu kan biroo ammoo, tarii inni guddichi, maallaqa meeqatu woggatti gara kiisa ykn baankii taphataa tokkootti dhangala’a isa jedhu.
Taphattoota galii isaanii irratti hundaayuun sadarka baasuun akka isa kaawwanii, falamiin eenyutu eenyeen caalaa, waan ilaalcha namootaa irratti rarra’uu miti. Maallqa kiisaa/baankii seene laakkayuu qofa gaafata. Dhumate.Taphataan tokko maallaqaan morkataa isaa caaluun waan agarsiisuufi dubbatu heddu qaba. Garuu, taphataan tokko maallaqaan isa kaan caale jechuun taphaanis shakkiifi mamii tokkoon alatti isa biroo irra aaneera jechuu miti. Kuni jaallatoota Ronaaldoofi mesiifis ifa ta’uu qaba.
Bifuma kanaan Forbes galii taphattoota kubbaa miilaa isa 2015 heerreguudhaan sadarkaa baasee jira. Akka ragaan Forbes wolitti qabe argisiiutti taphattoota kubbaa miilaa keessaa galii ol’anaa woggatti kan argatu Kiristiyaano Ronaaldoodha. Mesiin sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu. Akkuma sochii dirree miilaa irratti godhan, asittis hedduu wolirraa fagoo hinjiran.
Sadarkaa taphattootaa galiidhaan
Akka ragaan kuni ifa godhutti woggatti mindaan Ronaaldoo USD miliyoona 50. Kan ispoonsara isaa Nike irraa argatuufi isa madda biroo irraa funaannatuun wolitti, dimshaashumatti Ronaaldoon, woggatti $ miliyoona 79.6 harkaan gayata ykn baankii seensifata. Bifuma wolfakkaatuun Mesiinis woggatti dimshaashumatti abbaa $ miliyoona 73.8 tiiti. Kana keessaa midnaan $ miliyoona 50 ol ta’a. Sadarkaa 3ffaa irra kan jiru Zilaataan Ibrahimovich woggatti doolaara Ameerikaa 39.1 harkaan gayata.
Kana irrattis, namoonniifi kubbaaniyoonni adda addaa beeksisa isaaniitiif Mesii irra Ronaaldoo kan filatan ta’uun yaanni ummata irraa sassaabame ifa godheera. Dandeettii kubbaa qofa osoo hintaane argaan isaas, fudhatamiinsa argannaa kanaaf, sababa ta’uu hinoolle jedhama. Isin maal jettu?
Sadarkaa taphattoota kubbaa miilaa
Galii woggaa miliyoona (doolaaraan
taphattoota kubbaa miilaa
Previous articleAirbus rookkeettii si’a heddu gara samiitti dhuka’uu dandeettu hojjachuudhaaf
Next articleGanzabee Dibaabaa IAAF Diamond League mt 5000 magaalaa Osloo moo’atte